Chii chinonzi Sicav? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi Sicav?
Kana tichitaura nezve sicav isu hatisi kutungamira kwekutanga kune yemhando yekudyara. Mune mazhinji emakesi akabatanidzwa nevanhu vane simba rekutenga rakakwirira uye ndiani anoshandisa aya maturusi ekudyara ku Itai kuti vabatsirwe kuchengetedza kwako zvakanyanya kunyatsoita uye neakateedzana ezvakanakira zvaunofarira. Nekuti zvazviri, izvo zvinonzi sicav hachisi chigadzirwa chemugari chero upi zvake, sezvamuchaona kubva zvino zvichienda mberi. Nekudaro kupokana nemamodheru aya sezvo ivo vasinganakirwe nemukurumbira wakanyanya pakati pevashambadzi vadiki nepakati nekuda kwehunhu hwavo hwakakosha.
Asi yave nguva yekuti iwe uzive kuti sicav chii chaizvo. Zvakanaka, iri rudzi rweCollective Investment Institution yemubatanidzwa, uyo ane chinangwa chekutsvaga mari, midziyo kana kodzero dzeveruzhinji kuti vazvitarisire uye ivaise muzvinhu, kodzero, kuchengetedzeka kana zvimwe zviridzwa, zvemari kana kwete. Iyo inowirirana nechidimbu cheAnoshanduka Capital Investment Makambani.
Nekudaro, gakava rekuti zvigadzirwa zvemari zvakaburitswa zviri chaizvo nekuda kwemutero wavo. Kana kuiisa ine nzwisiso iri nani nekuda kwemutero wayo wakaderera. Kusvika pakuti mune dzakawanda zviitiko, chikamu chakanaka chevashandisi vanoshamisika kana aya mamodheru ekudyara ari pamutemo chaizvo kana teerera nemirau mari muSpain. Hazvishamise kuti maSICAV anogara achibatanidzwa nevamirionea, vanamuzvinabhizimusi uye vanhu vane simba rakakwirira rekutenga zvakajairika.
1 Mutero we sicav
2 Zvinodikanwa zveichi chigadzirwa chemari
3 Kubatsira kwesivac
4 Unogona here kuisa mari mumakambani aya?
5 Ivo havasi vevapfumi chete
6 Njodzi profiles dzeaya mafomati
Mutero we sicav
Kana uchitaura nezve ichi chigadzirwa chemari, yako yekutanga kubatana inogara iri kubva kune yemutero maonero ekuona. Nekuti mukuita, mashandiro akaitwa vanobhadhara chete 1% muComputer Mutero. Uku ndiko kumwe kwekusiyana kukuru maererano neizvo zvakaitwa nevashambadziri vadiki nepakati avo, zvinopesana, vanobhadhara mutero pamari inowanikwa inowanikwa. Kuburikidza nechero chimbo chekudyara: zvikamu, kutenga uye kutengesa kwemasheya emasheya pamusika wemasheya kana vamwewo zvavo. Nemusiyano unooneka pakati pezvaunofanira kubhadhara pakati peimwe kana imwe fomati yekudyara.
Kubva pane ino mamiriro, zvinogara zvichishuvira kuti iwe unyore Variable Capital Investment Makambani. Asi chokwadi, izvi zvakaoma kwazvo kune avhareji vashandisi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vane akaomarara uye anodzvinyirira mamiriro. Nekudaro, mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti iwe haugone kubvumirana nekirasi iyi yezvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara. Chero zvazvingaitika, zvingave zviri nyore kuti iwe uzive izvo iyo zvinodiwa izvo zvinomisikidza kwauri iwe kuve mutori wechikamu chemari dzakadai dzakadai.
Zvinodikanwa zveichi chigadzirwa chemari
Kambani ine hunhu iyi inofanirwa kutevedzera zvakateedzana zvezvinodiwa, zvinova zvinotevera:
Iyi kirasi yemakambani inofanirwa kuumbwa neinenge zana vagovani inova ndiyo inosarudza pakupedzisira kuti iri sivac.
Iwe unoda mupiro muchimiro che shoma capital kutanga 2.4 miriyoni euros.
Chinhu chakakosha kwazvo pakugadziriswa kwayo ndechekuti inofanirwa kutarisirwa uye kudzorwa neiyo National Stock Market Commission (CNMV).
Investment yakaitwa kubudikidza neiyi yakasarudzika yekudyara modhi ichabhadharwa neiyo Mutero wemitero kubva pa1%.
Kunyangwe mushure mekunge chiitiko ichi chaitwa zviri pamutemo, ipapo chinobvisiswa mutero sekudzoserwa pamari inofambiswa pakati pe21% uye 27%. Ndokunge, zvakafanana nekutengwa uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya uye zvimwe zvigadzirwa zvemari zvakajairika.
Kana iwe uchizopinda Variable Capital Investment Company mumazuva mashoma anotevera, iwe unofanirwa kuziva zvese zvakanakira chiito ichi. Ehe, ivo vari kupfuura iwe zvaunogona kufungidzira kubva pakutanga uye ivo havana kuganhurirwa chete kune yakaderera mutero.
Ivo vanopa mutero muSpain izvo zviri 1% panzvimbo ye30% yeiyo yakajairwa Corporation Mutero.
Izvo zvinokutendera iwe kuti uite a kudzora kwakazara kwekudyara sezvo mupfungwa iyi yakafanana nemari yechinyakare yekudyara.
Imwe yemabhenefiti ayo ndeyekuti iwe unogona kubvisa uye chinja imwe huwandu hwemari, isina chero mhando yemakomisheni kana imwe mari mukutarisira kwayo.
Chinhu chitsva chikuru zvine chekuita nemamwe manejimendi mamodheru ndechekuti iwe uchave unokwanisa wedzera kana kudzikisa mari yako.
Unogona here kuisa mari mumakambani aya?
Mubvunzo wauchange uchizvibvunza iwe panguva ino ndewekuti kana iwe ukakwanisa kupinda kuti uise mari yako inowanikwa mune chero emakambani aya. Zvakanaka, kana chiri chokwadi chaicho kuti ndeyekudyara hupfumi hwakawanda, hauna gonhi iri rakavharwa. Nekuti mikana yakavhurwa kuitira kuti vakazvimiririra vakaita sewe vagone kupinda kuti vatore chikamu mune imwe yemakambani aya. Sei? Zvakanaka, kuburikidza neimwe nzira yakaita sekutenga zvikamu zveSICAV mu Imwe nzira Stock Market (MAB).
Iyi inzira yekuti iwe ugone kusarudza iyi nyowani imwe mukudyara kubva kune imwe nzira ine mwero kana kana uchida nayo zvikanganiso zvikuru nezve mhedzisiro yako. Kukupa iwe zano rekuti mari iyi ingazove yakaita sei, zvingave zvakafanana chaizvo nemabatiro aunowanzoita iwe pamwe nekubatana mari. Pasina kana mutsauko maererano nezviwanikwa zvemari. Kusvika padanho rekuti vamwe mamaneja vanotengesa imwe yemari yavo pasi peaya marongero ezvokutengeserana. Nechinodikanwa chete chekumirira huwandu hwevane zana vatori vechikamu kuti usvike.
Kana mamiriro aya akasasangana, iwe haugone kunyorera iwo masheya kusvika kufukidza vese vatengesi izvo izvi zvakakosha mari yekudyara inoda. Kunze kwehunhu uhwu, ivo vakanyorwa senge chero imwe homwe, zvichienderana nepotifoliyo iyo yavakatumirwa. Nemhando dzese dzehupfumi hwemari, kubva kune idzo kubva kumari kusvika kune yakamisirwa mari. Pasina kukanganwa chero nguva imwe sarudzo kana zvirinani zvisiri zvechinyakare zvinhu. Mupfungwa iyi, hapana mutsauko unonzwisisika zvine chekuita neakajairika mari yekudyara. Kuve imwe yemafomati iwe aunogona kuhaya kwemakore akati wandei uye ayo maitiro ari pachena ari kukwira nekuda kwekudiwa kwayo kwakanyanya.
Ivo havasi vevapfumi chete
Pachivanhu, ichi chigadzirwa chemari chagara chakabatanidzwa nehupfumi hwakawanda. Zvakajairika kuti vanhu ava vaise mari yavo yekuchengetedza uye yavo pfuma mune izvo zvinonzi Variable Capital Investment Makambani. Asi maitiro aya akachinja zvakanyanya mumakore apfuura. Kusvika padanho rekuti iwe pachako uri muchinzvimbo panguva yekushanda nerudzi urwu rwezvishandiso zvekudyara. Kwete pasina, kunyangwe chikamu chakanaka cheichi zvigadzirwa chinodzorwa nevanhu vane simba rekutenga rakakura kwazvo pasirese, vamwe vanofarira Torrenova kana Bellver Inoshanda senge mari yekudyara. Zvese mune zvakanaka nezvakaipa. Kusvika padanho rekugadzirisa seimwe yezvinhu zvinozivikanwa zvigadzirwa zvaungawana muSpain kubva ikozvino.
Nekudaro, pane mimwe misiyano midiki iyo iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo zvine chekuita nemanagement manejimendi. Kune rimwe divi, mune sicav vatengesi vanogadzirwa sevachagovana vekambani pachayo. Nekuda kweichi chimiro chepamutemo, ivo vane kodzero yekuvhota mumisangano uye nekudaro simba rakakosha rekutora sarudzo. Chinhu chisingaitike kana iwe ukanyora mari inoenderana nehunhu uhu. Kune rimwe divi, mune mari yakafanana neVanoshanduka Capital Investment Makambani, nzira yekupinda yakasiyana. Ndokunge, iwe unosimbisa kutora chikamu kana uchikwanisa, kwete kana uchida.
Njodzi profiles dzeaya mafomati
Variable Capital Investment Makambani anokwanisa kuchengetedza yakanyanya njodzi mamiriro zvichienderana nekuumbwa kweportfolio yavo. Kunyanya nekuti zvinoenderana nekuratidzwa kwako kumisika yemari. Nechinhu chinoshanduka chinogona kuona pakati pe35% ne80% yeiyo portfolio yekudyara. Kuti ubvise izvi, ichi chikamu cheiyo portfolio chinogona kudzikiswa kuburikidza nehukuru hwemari yakatarwa. Nechiyero chinogona kusvika kusvika ku80% yekuratidzwa. Nenzira iyi, njodzi dzinenge dzakanyanya kuwanda kupfuura mune muenzaniso wekare.
Sicavs inogona kuchinjika kune chimiro cheumwe neumwe investor. Iko hakuna imwechete uye isingachinjike modhi inoenderana nezvinodiwa chaizvo zvine vanhu ava. Ndiri kureva, une mhando zhinji dzaunosarudza kubva kuitira kuti iwe ugone kunyatso shandisa yako yemhuri uye neyako zviwanikwa zvinobudirira. Mupfungwa iyi, zvakafanana neimwe homwe yekudyara kana zvimwe zvigadzirwa zvemari. Hazvishamise kuti, imwe yemisiyano mikuru pakati pemamodeli mana emaneja iri mune yavo mutero chinhu.
Kune rimwe divi, Variable Capital Investment Makambani anokwanisa kuchengetedza mamwe akasiyana mhando dzekudyara. Semuenzaniso, inflation-yakabatana zvisungo, iri kubuda yakamisirwa mari mune chero mhando yemari, uye kunyangwe mune zvimwe zviitiko mune zvisingawanzo zviwanzo zvemari midziyo senge zvikwereti kana kunyangwe inonzi yakakwira goho. Mune mamwe mazwi, une dzimwe nzira dzakawanda dzekudyara mari dzako mumhando idzi dzezvigadzirwa zvemari. Nekuchinjika kukuru mukutungamira kwako kwemazuva ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi Sicav?
Mamogeji neEuribor, zvakabatana sei?
Kudzoka kudziviriro uye kukwira kwemitengo kunokuvadza musika wekutengesa